Caymiska Caafimaadka ee Qaxootiga - Isbahaysiga Caafimaadka Soogalootiga & Qaxootiga
Dalka Maraykanka, soogalootiga iyo qaxootiga waxa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan ceymiska caafimaadka iyo faa'iidooyinka. U qalmida waxaa lagu go'aamiyaa qaxootiga iyo heerka socdaalka. Sebtembar 30, 2021, Madaxweyne Biden waxa uu ka taahay HR 5305 sharci ahaan, sidaas darteed u fidinaysa manfacyada shakhsiyaadka Afgaanistaan ​​ka yimid ee soo galaya Maraykanka iyada oo la raacayo magacaabista Parolee Bini'aadantinimo. Si loo go'aamiyo u-qalmitaankaaga Medicaid (Apple Health ee Gobolka Washington), tixraac shaxda hoose.
U-qalmitaanka Caafimaadka Apple ee Heerka Socdaalka
Shakhsiyaadka Afgaanistaan ​​ka yimid waxay siidaayeen sharafeed Maraykan ah intii u dhaxaysay Luulyo 31, 2021, iyo Sebtember 30, 2022, ama sii daynta sharafeed US ka dib Sebtembar 30, 2022, kuwaas oo ah caruurtooda, xaaska, waalidka, ama masuulka sharciga ah hadda waxay xaq u leeyihiin Apple Health dadka waaweyn iyo Gargaarka Caafimaadka Qaxootiga.
Sida loo codsado Apple Health
U soo gudbi codsiyada shaqsiyaadka da'doodu ka yar tahay 65 sano jir Maamulka Daryeelka Caafimaadka:
Online: Tag Washington Healthplanfinder oo dooro "Codso Hadda"
Su'aalo? Call 1-800-562-3022
U soo gudbi codsiyada shaqsiyaadka da'doodu tahay 65 ama ka weyn, indho la'aan ama naafo ah, ama u baahan Adeegyada iyo Taageerada Muddada Dheer (LTSS) Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka:
Online: Tag Xiriirka Washington oo dooro "Codso Hadda"
Qof ahaan: xafiiska adeega bulshada deegaanka
Su'aalo? Call 1-877-501-2233
Adeegyada turjubaanka ayaa diyaar ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, hubi kan hal bog ah ay samaysay Maamulka Daryeelka Caafimaadka Gobolka Washington.
La soo dhaafay: 11 / 29 / 2021